Sidee ayaan soo kabsado tirtiray fariimaha sawir ka iPhone (iPhone 6 mid)?
Ilaa hadda sida aan u sheegi karo, habka caadiga ah si ay u soo kabsadaan sawir fariimaha iPhone isticmaalayo gurmad ka Lugood. Haddii aad dhawaan synced aad iPhone la Lugood, waxaad dooran kartaa in la soo celiyo aad iPhone ka gurmad ah oo ay xaq u gujinaya ku yaal dhinaca bidix ee Lugood iyo xulashada "Soo Celinta kaga imaanayo". waxaa jira hal wax oo aad u baahan tahay in fiiro gaar ah waa in content iPhone oo dhan laga tirtirayaa iyo bedelay content ee gurmad, laakiin ugu yaraan, aad fariimaha sawir tirtiray soo laabtaan. Habka kale waa in ay si toos ah iskaan ceshan fariimaha sawir ka iPhone.
Haddii aad rabto in aad iPhone content jira oo soo kabsado fariimaha sawir ka iPhone, waxaa hab run ah. Waxaad u baahan tahay qalab kabashada fariimaha sawir iPhone dhinac saddexaad, oo halkan waa talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) .
Software ayaa sidoo kale soo kabanayo fariimaha sawir tirtiray ka iPhone by adiga oo isticmaaleya isticmaale Lugood gurmad file. Farqiga u dhexeeya waa in ay caawin karaan in ay Macdan aad gurmad Lugood, kuu ku eegaan iyo eegista soo kabsado sawir fariimaha iPhone. Waxa kaliya ee aad qaadataa xoogaa daqiiqado ah. Waxaa intaa dheer, labada qeybood oo kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan ceshan xogta ka iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5 / 5S / 4s / 4 / 3GS aan files gurmad.
Next, aynu soo kabsado fariimaha sawir ka iPhone la Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac) in tallaabooyinka.
Tallaabada 1. Warbixiinta Lugood gurmad u sawir fariimaha iPhone
Orod barnaamijka ka dib markii ay ku rakibidda on your computer. Si aad u soo kabsado sawir fariimaha iPhone, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab soo kabasho hore.
Markaas dhammaan faylasha gurmad si toos ah ku qoran doonaa, haddii aad synced qalabka ka badan hal la Lugood aad Mac. Mid ka mid ah aad iPhone meesha aad badiyay fariimaha aad sawirka Dooro, oo guji "Start Scan" in ay sii wadaan.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan tirtiray sawir fariimaha iPhone
Muddo ka dib, waxa ku jira oo dhan oo ah gurmad la soo saaro doonaa oo soo bandhigay sida category. Waayo, sawir fariimaha iPhone, waxaad dooran kartaa in ay ku eegaan waxa ku jira "Messages" category. Dooro fariinta dhexe, waxaad ka akhrisan kartaa dhammaan faahfaahinta dhinaca midig ee suuqa kala, oo ay ku jiraan qoraalka, sawirada, videos, iyo xataa files audio. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" dusheeda, waxaad iyaga ku badbaadin karaan on your computer ka mid ah.
Haddii aad rabto oo kaliya in ay dib u soo ceshano ku lifaaqan farriin ka iPhone, waxaad dooran kartaa "Messages Lifaaq" u soo kabashada. Waxaa ku jira oo dhan ku lifaaqan ka farriimaha aad.
Haddii aad tahay qof user Windows ah, u isticmaalaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka iyo qabtaan tallaabooyinka la mid ah dib u soo ceshano fariimaha aad. Currently labada Windows iyo Mac users isticmaali kartaa barnaamijka si toos ah baarista iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 ama iPhone 3GS ceshan xogta ka haddii aadan haysan gurmad ah.
Sidee si ay u gudbiyaan mp3 si iPhone daaqado / Mac
Talooyinka syncing iPhone la Multiple Kombiyuutaro
> Resource > iPhone > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Picture Messages ka iPhone